Who were Bengali, so called Rohingya?: ပြည်သူကြားက ပြည်သူ.အသံ
မြန်မာနိုင်ငံ အရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သလို ထိုမြန်မာပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ အရေးသည်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံသား အားလုံး နှင့် သက်ဆိုင်ပါသဖြင့် ကျမ simple views မှ တွေ.မြင် ကြားသိ ရသမျှကို ဖောက်သည် ချသွားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
နာမည်ကြီး သတင်းဌာနတခု ရဲ့ အမှား က အစပြုပြီး လူ.အခွင့်အရေး ဟစ်ကြွေးပြီး မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဖြစ်ချင်နေရှာသော ရိုဟင်ဂျာ များရဲ့ ခြေလှမ်းများ ကို အများပြည်သူ သိခွင့်ရလိုက်တာဟာ အင်မတန်ကံကောင်းတယ် အချိန်မီသွားတယ်လို. အကောင်းဖက်က မြင်မိပါတယ်...
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံတွေဟာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ.အစည်းတွေနဲ.ရောပြီး မြင်တွေ.နေရပါတယ် ၊ ပွဲတခုခုလုပ်ရင်လည်း လူဝံဆန်.အောင် အများဂရုထားမိအောင် အကျွေးအမွေးနဲ. ထောက်ပံ့ပြီး နေရာယူနေကြတာ နိုင်ငံရေး သမားများက လွဲလို. မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ မသိကြပါဘူး... အဲ့လိုနဲ. နိုင်ငံရေးသမားများနဲ.ရောနှောကာ တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လို. ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်အရေးဆိုတာတွေကို ဥရောပင်္နဲ. အမေရိက တခွင်မှာ မတရားတောင်းဆိုပါတော့တယ်... ( ဒီနေရာမှာ နား နဲ. မနာ ဖဝါးနဲ. နာပါ.. အသက်သာကြီးသော်ငြား အချိန်မစီး ကျပ်မပြည့်ရှာသည့် နိုင်ငံရေးသမား အဖိုးအို တို. က ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံများရဲ့ နွားများပါပဲ )
RFA နဲ. အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ ဝါကာအူတင် ရဲ့ အဆိုအရ
၁ ။ သူတို.သည်အာရပ်က လာခဲ့ကြတယ်လို. ဆိုပါတယ်
( အာရပ်က လာမှန်းသိရင် အာရပ်ကို ပြန်ပါ . မြန်မာပြည်မှာ သင့်အတွက် နေရာမရှိပါ )
၂ ။ ဖဆပလ က မဲလိုချင်လို. ဘင်္ဂါလီတွေကို အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်
( ဒါဟာ ယနေ.ထက်တိုင် ကျင့်သုံးဆဲ အမှန်တရား တခု.. ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်လိုချင်တဲ့ လူကြီးမင်းများ သတိကြီးစွာနဲ. သင်ခန်းစာယူရမယ့် အချက် )
၃ ။ အမှန်တရား ပြောခြင်းသည် ဒီမိုကရက်တစ်မဖြစ်ဘူးဆိုပဲ
၄ ။ ဦးတင်ဦး ကို စော်ကားမိတဲ့အတွက် ဝါကာအူတင် မှ မှားကြောင်း တောင်းပန်ရပါမယ်
၅ ။ အာရပ် ကုန်သည်တွေက မလေး နဲ . အင်ဒိုနီးရှားကို အသွား မုန်တိုင်းမိလို. တချို.က ရခိုင်ကို ရောက်လာပြီး ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ. ရောနှောနေထိုင် ပါတယ်တဲ့... အဲ့တော့ မလေး နဲ. အင်ဒိုနီးရှား ဖက်ကို ရောက် သွားတဲ့ ကျန်တဲ့ ကုန်သည်တွေက အခုဆို မလေးရှား နဲ. အင်ဒို နီးရှား လူမျိုးတွေပေါ့နော်...
( ဒီနေရာမှာတင် ရှင်းနေပါတယ်.. ရခိုင်လူမျိုးတို.သည် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ပေါက်လွှတ်ပဲစား များ ရောက်မလာခင်ကတည်း က နေထိုင်နေသော တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ပြီး လေလွှင့် ကုန်သည်များကတော့ နိုင်ငံခြားသားများပါ ဖြစ်ပါတယ် )
၆ ။ ဝါကာအူတင် ရဲ့ အဆိုအရ ရိုဟင်ဂျာနဲ. ဘင်္ဂါလီ တို.ရဲ့ ကွာခြားချက်များကတော့ ပုဆိုး ထမီ ဝတ်ခြင်း ၊ ဗမာ နာမည်ပေးခြင်းပါတဲ့
( အမေရိကန်က ပရော်ဖက်ဆာ တဦးဖြစ်တဲ့ ဝါကာအူတင် အမေရိကန်မှာ အပြင်ကော ထွက်ရဲ့လား မသိပါဘူး..
အင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ လည်း ဘောင်းဘီတွေ စကတ်တွေ ဝတ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်နာမည် ပြောင်းပေးထားကြပါတယ်...David , Steven , Susan , John ..စသည်ဖြင့်ပေါ့ မြန်မာတွေတင်မကပါ ကုလားပေါင်းစုံလဲ အပေါ်က ဘယ်လို ခြုံထားထား အောက်ကတော့ ဘောင်းဘီတွေနဲ.ရှင့်.. ရောက်ရာဒေသ နဲ. လိုက်လျောညီထွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ သူ.တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်လို. ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဥပဒေမှာ မှ မတွေ.မိပါဘူးရှင်
ခေတ်စနစ်ဆိုးရဲ့ အမွေကြောင့် ရှင်တို.လို နယ်စပ်မပြောနဲ. ရန်ကုန်မှာတင် မောင်သိန်း ၊ ကိုသိန်း ၊ ဦးသိန်း တို.နဲ. မြန်မာ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားကြတဲ့ ကုလားစစ်စစ်တွေ တပုံကြီးပါ.... တရုတ်တွေလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း ရှိပါတယ်... လဝက မှ ကိုငွေခင် မငွေခင်တို. သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ )
ရ ။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာ နေရပ်ပြန်ပို.တယ်ဆိုလို. တသက်လုံး မုန်းခဲ့တဲ့ ဦးနေဝင်းကို ထိုင်ရှိခိုးရမတတ် ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်
၈ ။ ဒီလူမျိုးတွေ နဲ. ပါတ်သက်ပြီး အစိုးရက ကန်.သတ်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်အနေနဲ. သဘောတူညီပါ၏
( ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဥပမာ သူတို.ဥပဒေ နဲ. တခုခု ငြိနေတယ်ဆိုရင် အပါတ်စဉ် ရဲစခန်းမှာ လက်မှတ်ထိုးရတာတို. ဘယ်မှ သွားခွင့် မရိ်ှတာတို. ရှိပါတယ်.. ဆိုပါတော့ asylum တင်ထားလို. မအောင်ခဲ့ရင် အမြဲတမ်း လက်မှတ်အချိန်မှန် သွားထိုးရပါတယ်...(သို.) တရားဝင် ဗီဇာရပေမယ့် သူတို.စိတ်ကျေနပ်မှု.မရှိရင် ကျောင်းသားအနေနဲ နေသူတွေလည်း လုပ်ရပါတယ်....ဒါဟာ မလွန်ပါ )
၉ ။ မြန်မာပါလီမန်အနေနဲ. မဟုတ်တရုတ် ဇါတ်ခင်းထားတဲ့ ဝါကာအူတင်တို.နဲ. အချိန်ဖြုန်းစရာကို မလိုတာပါ..
မြန်မာပါလီမန် ကိုယ်စား ကျမတို. ပြည်သူတွေက ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ
( Go back to Arab )
၁၀ ။ ဝါကာအူတင်ကို ထပ်လောင်းသတိပေးလိုတာကတော့ human rights ဆိုတဲ့ လူ.အခွင့်အရေးသည် အသုံးပြုဖို.ပါ အသုံးချဖို. မဟုတ်ပါလို. ( အခုဆိုရင် human rights ကို အကြောင်းပြလို. ရာဇဝတ်သားတွေ လွတ်နေတာကြောင့် ဒီိမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ ခေါင်းခဲနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဝါကာအူတင် သတိထားမိမှာပါနော့)
ဝါကာအူတင် တယောက်က ဒီလိုပြောပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်က ဦးအေနာယတ်အုလ္လာ က တော့ ဧရာဝတီ နဲ. တွေ.ဆုံမေးမြန်းခမ်းမှာ သူတို.ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်ပါဘူးလို. ပြောသွားခဲ့ပါတယ်...အာရကန်သားပါတဲ့ ( ကြည့်ရတာ ဝါကာအူတင် နဲ. ညှိမထားမိဘူးထင်ပါရဲ့ )
မြန်မာ့အသံကနေ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားနဲ. အသံလွှင့်သွားခဲ့ပြီးပါပြီတဲ့.... ရော ခက်ပြီ
( မြန်မာ့အသံကနေ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားကို ဘာအနေနဲ.လွှင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ နည်းနည်းပါးပါး မလေ့လာခဲ့ဘူးထင်ပါ့... ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားကို ဦးနုရဲ့ မိုက်မဲ မှု.ကြောင် နိုင်ငံခြားသား ဘာသာစကား အနေနဲ. အင်္ဂလိပ် ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ စကား များနဲ. အတူတူ ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ဖူးတာပါတဲ့...ဒါဆို အင်္ဂလိပ် နဲ. ဟိန္ဒူလဲ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရောလား... သမိုင်းသိသူတွေကတော့ ငြိမ်မခံဘူးနော့ )
သူ.အဆိုအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို လက်မခံခဲ့တဲ့ အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ ထိုင်းတဝိုက် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါ၏ ( လုပ်စား နိုင်ငံရေးသမား အများစုထဲမှာ မပါတဲ့သူတွေလို.ဆိုနိုင်ပါတယ် )
အင်္ဂလန်မှာကတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ. အတူတူ လုံးနေတာပါပဲ.... နိုင်ငံရေးသမားတွေကလဲ မပြောရဲကြဘူးလေ.. ဝေနှင်းပွင့်သုန် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ BCUK ဆိုတဲ့ ဘားမားကမ်းပိန်း အဖွဲ.ကြီး နဲ. ဆက်သွယ် လုပ်ကိုင်နေကြရလေတော့ သူ.အမျိုးတွေကို မထိရဲတဲ့ သဘောပေါ့လေ...
တိုင်းပြည်တပြည်အတွင်းမှာ နေထိုင်ခြင်း နဲ. တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း ဆိုတာ သီးခြားဏ္ဍ တွေပါ..... ဥပမာ.. အင်္ဂလန်မှာ နေတဲ့ ဗမာတယောက် နေထိုင်ခွင့်ရချင်ရမယ်.. ဒါပေမယ့် သူဟာ အင်္ဂလိပ်ပါ ၊ စကော့တလန် လူမျိုးပါ ၊ အိုင်ယာလန်လူမျိုးပါ ၊ ဝေးလ် လူမျိုးပါလို. ပြောလို.မရဘူး.. ဘယ်သူ.မှလဲ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဗမာ ဟာ ဗမာပါပဲ.... အင်္ဂလန်က နေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ လူတွေကို သိရင် လှမ်းမေးလိုက်ပါ... သူတို. စာအုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအဖြစ် ရေးပေးလားလို. ..
အခုလောက်ဆိုရင်လဲ အားလုံး အခြေအနေအမှန်ကို သဘောပေါက် ရိပ်စားမိလောက်ကြပါပြီ.. ဘီဘီစီ ဝေါ ပေါ်မှာ သမိုင်းအထောက်အထားအနေနဲ. ဖြတ်၊ ဆက်၊ ကပ် လုပ်ပြီး လာတင်ထားတဲ့ အမျိုးပျောက် ရိုဟင်ဂျာ ကြီးလဲ ရှက်နေလောက်ပါပြီ.... ရိုဟင်ဂျာတွေ ဖက်က ဟစ်ကြွေးပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဇာနည်လဲ ရှက်တတ်ရင် လဲသေ သင့်ပါပြီ... တခြားသော ဗမာ လူမျိုးတွေက လူမျိုးခွဲခြားတယ် ထင်နေသော တိုင်းရင်းသားများလည်း အမြင်မှန်သင့်ပါပြီ.. ကိုယ့်လူမျိုးစု မထိတိုင်း စွတ်ရမ်း မပြောပါနဲ... ကျမ ဗမာ အစိုးရမဟုတ်ပါ... တိုင်းရင်းသားများကို ချစ်သော ဗမာလူမျိုးတယောက် ....မြန်မာပြည်မှာ အေးအတူပူအမျှ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက် တိုင်းရင်းသားများကို ချစ်မြတ်နိုးသူ တယောက်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည် ... ဒါဟာ ဘာသာရေး မဟုတ်ပါ.. လူတိုင်း ယုံကြည်ရာ ရွေးချယ်ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိပါတယ်.... တိုင်းရင်းသား အစစ်သာ ဖြစ်ပါစေ ဘယ်ဘာသာမဆို လက်ခံပါ့မယ်... ရိုဟင်ဂျာ အရေးနဲ. ဘာသာရေးဟာ တခြားစီပါ... ဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ လူ.အခွင့်အရေး အလွဲသုံးစားမှု.ကြီး ပပျောက်သွားတဲ့အထိ ကျန်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှိသူများနဲ. လက်တွဲ ရပ်တည်သွားမယ်လို.. ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောကြားလိုပါတယ်..
အခုအချိန်က စပြီး ဒီပို.စ်အောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ နဲ. ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များ ၊ ဘီဘီစီ အပေါ် မကျေနပ်မှု.များကို ညစ်ညမ်းသော အသုံးမနှုန်းမပါပဲ လာရေးပါ... ပြည်သူကြားက ပြည်သူ.အသံ အားလုံးကို Welcome.
( ဆင်ခြင်ဖို.နဲ. ဝေဖန်အကြံပြုဖို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ် )
ဒီပို့စ်ကို နောက်တခေါက် ပြန်ဖော်ပြပေးတာပါ။
Ref: http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/2011/11/blog-post.html (မှ ကူးယူးဖော်ပြသည်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 8:26 AM
လား ခွီးသားကုလားတိ မောန်းအမိကိုလိုး ကဲ
ဟုတ်ပြီလား ခွေးတောင်ဒီလောက်ဆဲရင် နား
လည်တယ် ဒီကုလားစုတ်တွေ ခွေးလောက်
တောင် အသိမရှိဘူး အဲဒါကြောင့်လဲ မွတ်ဆလင်
ဖြစ်နေတာ စောက်ဖုတ်ကို ဖင်ကုန်းပြီးဦးတိုက်
နေတာ ခွေးလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိတာ
မင်းတို့တော့ ဗင်လာဒင်သေသလို ခွေးသေ ၀က်
သေ သေတော့မယ် ။ခွီးသားကလားတိ ။
ဒီရိုဟင်ဂျာဆို တဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေဟာ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ လူ့ အခွင့်အရေး အရေခြုံပြီး အချောင်နှိုက် အမြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့တာလီဘန် အဆက်အနွယ် အယ်ကေးဒါး လက်ဝယ်ခံ အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် မူဆလင်များ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဟာ ဒီရိုဟင်ဂျာ ခေါ်ဆိုသောဘင်္ဂလီ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားမူဆလင်များဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်တွင် ကိုယ့်ညီနောင်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေမဲ့ အစား တိုင်းတပါး ရန်ဖြစ်တဲ့ 
ဒီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို အစိုးရစစ်တပ် KNU, KIA, SSA ,UWSA ,မွန်ပြည်သစ်,ABSDF,ALP,CNA ,KNPP စတဲ့ ရှိရှိသမျှတပ်တွေ က ဒီ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းတပါးသား မျိုးမစစ်ကုလားစုတ်တွေ ကို ကျွန်မတို့ ချစ်သော အမိမြေ မြန်မာပြည်ကြီးမှ အပြီးတိုင် မောင်းထုတ်ကြပါစို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမ အားလုံးကို တိုက်တွန်းပါတယ် ရှင်
သို့ ...... ကိုမြအေး (၈၈ -ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်)
ငွေ(ဒေါ်လာ)မျက်နာကြည့် ပြီးမြန်မာလူမျိုး၁၃၅ လူမျိုး...
လေးစားအပ်တယ် ရခိုင်သူသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားအပေ...
ရိုဟင်ဂျာ(ငလိမ်ဂျာ)အပေါ် တိုင်းရင်းသားတို့ အမြင်